Thomas Cook India eo amin'ny lalan'ny fitomboana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Thomas Cook India eo amin'ny lalan'ny fitomboana
Thomas Cook (India) Ltd. dia niasa ny anaran'ny marika Thomas Cook tsy tapaka tao India hatramin'ny 1881. Tamin'ny 2012 rehefa nahazo ny Fairfax Financial Holdings any Canada ny TCIL, dia nanao fifanarahana fahazoan-dàlana miaraka amin'ny orinasa Thomas Cook Group UK ny TCIL. ny marika mandra-pahatongan'ny 2024 manerana an'i India, Sri Lanka, ary Maorisy. Ny fifanarahana fahazoan-dàlana marika dia nanome ny TCIL ihany koa ny zon'ny fandavana voalohany hahazoana ny marika raha sendra mihodina ny Group alohan'ny 2024.
ankehitriny, Thomas Cook (India) Ltd. (TCIL) nanambara fa nanao sonia fifanarahana tamin'ny AlixPartners, Mpitantana manokana voatendry an'i Thomas Cook UK, hahazoana ny zon'ny Marika Thomas Cook any India, Sri Lanka, ary Maorisy amin'ny fandoavana indray mandeha GBP 1.5 tapitrisa (sahabo ho 139 tapitrisa).
Ny TCIL dia nifanarahana tamin'ny fandoavana ny saran'ny fahazoan-dàlana marika R isan-taona. 20 tapitrisa hatramin'ny TCUK hatramin'ny 2024 amin'ny fampiasana ny marika.
Ny fahazoan'ny TCIL ny fananana manokana ny marika Thomas Cook amin'ireo tsena ireo dia midika hoe:
TCIL dia afaka mampiasa ny marika marika serivisy serivisy malaza izay niasan'izy ireo nandritra ny 138 taona tany India izay mankafy ny fahatsiarovan-tena avo sy ny fananana marika matanjaka.
Ny fifanarahana dia miantoka ny zon'ny fampiasana marika mandritra ny fotoana tsy voafetra ary midika izany fa ny TCIL dia afaka mampiasa ny marika mandritra ny fotoana tsy voafetra.
Ity hetsiky ny TCIL ity dia manakana ihany koa ireo miditra vaovao amin'ireo tsena ireo amin'ny fampiasana ny marika
Marika bebe kokoa
Ho fanampin'i Thomas Cook, ny TCIL dia miasa amin'ny marika fizarana B2C sy B2B anisan'izany ny SOTC, TCI, SITA, làlana aziatika, Allied T Pro (ATP), Australian Tours Management (ATM), Desert Adventures, Luxe Asia, Kuoni Hong Kong, TC Travel , Private Safaris East & South Africa, Sterling Holidays, ary Digiphoto Entertainment Imaging (DEI), miaraka amin'ny fampiasam-bola stratejika ao Ithaka avy amin'ny Travel Junkie Solutions.
Taorian'ny fivarotana UK ny tsatokony iray manontolo tao amin'ny TCIL tamin'ny Fairfax Financial Holdings tamin'ny taona 2012, ny Thomas Cook India Group dia nanomboka tetika fitomboana sy fanitarana lehibe. Androany, ny Vondrona dia mandrindra firenena 29 sy kaontinanta 5, ekipa misy maherin'ny 9,700, ary karama mitambatra mihoatra ny R. 6718.7 Cr. (mihoatra ny $ 0.96 Bn.) ho an'ny taom-piasana nifarana tamin'ny 31 martsa 2019.
Ny TCIL dia manohy matanjaka ara-bola miaraka amin'ny vola sy ny fifandanjan'ny banky amin'ny vola Rs. 10,883 Mn. hatramin'ny 30 septambra 2019. Amin'ny sehatra tokana, tsy mandoa trosa i Thomas Cook India. Ny Vondrona dia mamoaka onjam-bola maimaimpoana isan-taona manodidina ny Rs. 2,000 XNUMX Mn.
MSC Meraviglia hitondra mpandeha fitsangantsanganana 50,000 mankany Ocho Rios